Macluumaadka ganacsiga Ghostwriter I Caawinaad deg deg ah oo laga helo qoraaga qoraaga
Macluumaadka ganacsiga Ghostwriter
, 16: 53
Qorayaashayagu waxay leeyihiin khibrada lagama maarmaanka u ah aqoonta ganacsiga
Macluumaadka ganacsiga wuxuu ku yaalaa inta udhaxeysa fahamka farsamada iyo fikirka gorfeynta. Waqtiyada internetka oo idil iyo nidaamyada wax soo saarka tooska ah ee tooska ah, koorsadu waxay gudbineysaa xaqiiqooyinka muhiimka ah. Layaab malahan maadada ay caan ku yihiin ardayda iyo shirkadaha labadaba. Isla mar ahaantaana, waddada loo maro dhammaystirka waxay u baahan tahay wax ka qabashada laba maaddo oo aan wax badan ka wadaagin, gaar ahaan aasaasiga.
Qeybta sayniska, xisaabta iyo cilmiga kombiyuutarka teori waa in aan la dhayalsan. Si sax ah maxaa yeelay maadooyinka badan awgood, faahfaahinta ugu dambeysa lama aadin, soosaarida iyo fahamka badanaa waa la dayacay. Caawinaad iyo khibrad khibrad leh, hawlaha mararka qaarkood aadka u adag ayaa si fudud wax looga qaban karaa.
Si loo barto aaladaha xisaabta ee waliba loo adeegsado sayniska kombiyuutarka iyo dhaqaalaha, waqti badan ayaa loo baahan yahay. Waqti sidoo kale lagama maarmaan u ah meelaha kale. Fahmitaanka qalooca gawaarida Gaussia, oo muhiimad weyn u leh tirakoobyada iyo dhaqaalaha labadaba, ayaa weli ah qayb shaqo oo dheeri ah. Kaliya caddeynta jiritaanka waxyaabaha laxiriira iskuulka ayaa ardayda mashquuliya sanadba sanadka ka dambeeya.
Mawduuca labaad ee aqoonta ganacsiga wuxuu leeyahay shuruudo gebi ahaanba ka duwan. Way ka yartahay fahamka aragtiyaha cilmiyaysan maadooyinka maaddooyinka ah ee aadka u badan. Inta udhaxeysa maamulka ganacsiga iyo cilmiga bulshada, hawlo badan ayaa sugaya in si wanaagsan loo barto. Fahamka ganacsigu wuxuu ka sarreeyaa inuu awood u leeyahay inuu fahmo dhinacyada shaqsi ahaan aragti ahaan iyo dhaqan ahaanba. Sababtoo ah hibooyin aad u kala duwan ayaa mararka qaarkood halkan looga baahan yahay marka loo eego IT-ga farsamada, waxay kaa caawin kartaa inaad ka hesho caawimaad dibedda ah. Mararka qaarkood waxaa jira aqoon la’aan ku saabsan duruufo aragtiyeed oo gaar ah, oo sharaxaad ka bixinteedu ay jadwalka waqtiga oo dhan u rogi karto.
Maaddaama aad tahay khabiir ku takhasusay IT-ga, waa inaad haddaba barataa sayniska kombiyuutarka iyo dhaqaalaha labadaba. Marka waxaad iskaga cabirtaa ardayda kale ee aad wax ka barato oo kaliya cilmiga kombiyuutarka aadna ugu wanaagsan. Dhanka kale, waa inaad iska difaacdaa ardayda kale ee dhaqaalaha. Tani way ka fog tahay hawl fudud. Maaddaama aad ka qalinjabisay aqoon-isweydaarsiga ganacsiga, waa inaad xirfadle ku noqotaa 2 aag Ardayda ku jirta hal maaddo waxay si gaar ah diiradda u saarayaan maaddadooda. Ardayda caadiga ah waxay kaliya diirada saaraan hal maado. Dhinaca kale, waa inaad si isku mid ah uga fiicnaataa ama uga fiicnaataa labada aag ee imtixaannada si aanad uga diiwaangashanayn isku dayga saddexaad. Runtii tani waa hawl aad u culus oo aad adigu dejisay. Waqtigan xaadirka ah, sidoo kale, waxaan kaa caawin karnaa adigana Shaqada farsamada I caawi. Kaliya nala qaado Kontakt tusaale ahaan by Mail oder phone ama codso mid bilaash ah dib u xusuusasho mid. Kadib waxaan kuu soo wici doonnaa gebi ahaanba bilaash oo waxaan duubi doonnaa mashruucaaga. Shaqada tacliimeed, waa inaad kireysataa hay'addeena qorista qoraaga.
Koorsada dabcan waxay leedahay dhowr diiradood oo kala duwan oo aad u dooran karto arday ahaan. Adiga oo ah arday ku xeel dheer cilmiga ganacsiga, waxaad baran doontaa maaddooyin badan oo ku saabsan sayniska kombiyuutarka iyo ganacsiga. Waxaad ku baran doontaa aqoonta aasaasiga ah mowduucyada soo socda:
Nidaamyada dhammaadka hore,
Aasaaska aqoonta ganacsiga.
Intaas waxaa sii dheer, waxaad baran doontaa maadooyinka maadooyinka ganacsiga sida
Xisaabaadka iyo xisaabaadka sanadlaha ah,
Dhaqaalaha Ganacsiga iyo
Ogow xisaabinta waxqabadka kharashka.
Qorayaashayagu waxay qoraan shaqadaada. Waxaan kaa caawin karnaa qoraaladeena cirfiidka. Shaqada gurigaaga haloo qoro. Waxaad layaabi doontaa natiijada.
Qorayaasheennu waxay leeyihiin waayo-aragnimo sannado badan leh aqoontaanna waxay ku abuuri karaan waxyaabo badan oo aan adiga lagaa fikiri karin muddo gaaban. La xiriir Si fudud noo soo dir an Mail oder phone. Waan duubi doonnaa hawshaada isla markaana waan ku siin doonnaa isla markiiba dalab by. Hadda nala soo xiriir oo dalbo taada shahaadada Masterka oder Maqalka. Waxaad sidoo kale na siin kartaa mid dib u xusuusasho si loo hagaajiyo Kadib waxaan kuu soo wici doonnaa waqti adiga kugu habboon. Qorayaasheennu waxay ka caawin doonaan abuurista iyo su'aalaha. Qorayaasheennu waxay ku faraxsan yihiin inay qoraan shaqadaada cilmiyeed.
Cilmigaaga Shaqada guriga, shahaadada Masterka, Qoraalka PhD ama waxaad noogu soo qori kartaa qoraalkaaga. Si aad u hesho darajo wanaagsan, waa inaad caawimaad raadsataa. Sababtoo ah hawlo badan oo hordhac ah waa in la qabtaa si loo soo gudbiyo shaqo cilmiyaysan oo wanaagsan. Waa inaad si joogto ah uga shaqeysaa iyada oo aan lagaa dhex gelin, haddii kale waxaad si dhakhso leh uga bixi doontaa mawduuca. Ka tag cilmigaaga Shaqada guriga qor. Qoraa-yahankeenna aqoonta leh ayaa shaqada kuu qaban doona. Adeegsiga adeeggan oo kale wuxuu ku siinayaa xorriyad badan oo aad ugu diyaar garowdo maadooyinka adag.
unsere Qorayaashu waxay leeyihiin waayo-aragnimo sannado badan ah oo ku saabsan aaggooda cilmi-baarista oo aad haysato shahaado maadadaada ah. Kama baran kartid aqoontaan dhowr toddobaad inta lagu guda jiro waxbarashadaada. Der Bachelor iyo Maqalka waxaa lagu gaari karaa oo kaliya dadaal badan. Markaad qalin jabiso waxaa jira ikhtiyaarro badan oo aad adigu awoodid oo kale sayniska tacliinta sii wad inaad xirfad yeelato awoodo. Waxaa jira shaqo-bixiyeyaal badan oo suurtagal ah adiga qalin-jabiya ahaan Meelaha caadiga ah ee shaqada ee qalin-jabiyaha waa:
Ku dhowaad dhammaan ganacsiyada ganacsiga
Hay'adaha cilmi baarista
Qoraalka bachelor-ka ama shahaadada mastarka sidoo kale waa in la qoraa. Tani waxay badanaa la xiriirtaa kharash badan oo waqti iyo dadaal ah. Way adag tahay in qofna ku dhashay barafasoor waalid ahaan iyo qorista warqad cilmiyeed. Sidaa darteed, marka la barbardhigo qoraaga cirfiidka, waxaad u baahan doontaa si aad u dheer. Waqti badan ayaad ku qaadan doontaa baaritaanka suugaanta, sameynta qabyo qoraalkii ugu horreeyay ee dulucda dulucda, oo si hufan u qaabeeyso. Uma sahlaneyn qoraaladeenna bilowga sidoo kale. Waxay qaadatay qoraaladeena cirfiidka todobaadyo badan mararka qaarna bilo ilaa ay ka heleen aqoontaan.
Iyadoo la adeegsanayo shahaadada bachelor-ka, shahaadada mastarka ama shahaadada diblooma, shaqada waa in si joogto ah loo qoraa, haddii kale dunta guduudan si dhakhso leh ayaa loo lumiyaa. Qorayaashayada ruug-caddaaga ahi waxay ogyihiin sida shaqadaadu u qaabeysan tahay si macno leh. Badanaa waxaad isticmaali doontaa qaabka soo socda ee soo socda
Dhibaatada iyo ujeedada shaqada,
Qaybta la taaban karo,
Lifaaqa ayaa jira.
Qoraal-gacmeedka ku saabsan macluumaadka ganacsiga
Waxaan si taxaddar leh ugu xallin karnaa dhibaatadan qoraal ahaan. Qoraalkaaga ama qoraalkaaga ha laguu qoro. Nala soo socodsiiya, waanu la wareegi doonnaa shaqadaada oo waxaan bilaabi doonnaa inaan adiga kaaga shaqeyno. Qorayaashayagu waxay leeyihiin khibrad sannado badan ah oo ku saabsan waaxdooda xog-ogaalnimada ganacsiga. Qorayaashayada aqoonta leh ee ghostwriters-ka waxay ku qoraan warqad kasta oo cilmiyaysan goobtaada. Waa inaad aqbashaa kaalmadan. Shaqada tacliimeed ama cilmiyaysan, waxay macno u leedahay in la qaato wakaalad-qorayaal oo shaqada la qoro. Dabcan waxaan mas'uul ka nahay tayada wanaagsan ee shaqada.
Macluumaadka ganacsiga ee warshadaha dawooyinka
Warshadaha dawooyinka waxay had iyo jeer raadinayaan xalalka lagu daaweeyo cudurada. Intaa waxaa dheer maadooyinka sayniska dabiiciga ah chemistry, biochemistry iyo xog-ogaalnimada ganacsiga oo muhiim ah. Dadka isbitaalada ku jira waxaa laga caawiyaa barnaamijka nidaamyada cusub.
Macluumaadka ganacsiga ee nolosha xirfadeed
Kadib markaad dhameyso waxbarashadaada sida khabiir ganacsi ganacsi oo IT ah, waxaad u shaqeyn kartaa horumariyaha webka, barnaamij-sameeye, mashiinka raadinta mashiinka wax soo saar ama horumariyaha nidaamka, iyo waxyaabo kale. Kadib markaad dhameyso waxbarashadaada, waxaad sidoo kale u shaqeyn kartaa weriye madaxbanaan shirkadaha kale sidaasna waxaad kuheli kartaa dakhli celcelis ahaan ka sareeya. Wax ka samee! Waan kaa caawin doonaa erfolg keen!
Macluumaadka ganacsiga ee shirkadaha ganacsiga
Shirkadaha ganacsigu aad ayey u xiiseeyaan ardayda qalin jabisay. Ka qalin jabis ahaan, waxaad isha ku haysaa heerka farshaxanku hadda ku sugan yahay. Waxaad ku dari kartaa fikradahaaga shaqadaada loo shaqeeyahaaga. Laakiin tan waxaad u baahan tahay kartidaada buuxda. Kaliya qaado Kontakt anaga. Waxaan kuu xallinaynaa dhibaatada adiga!
Hubinta tayada ee dhinacyada aqoonta ganacsiga